Ukuthengisa kwiNtengiso yeNdawo yokuThengisa izindlu | Martech Zone
NgeCawa, uDisemba 21, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sebenzisa ubuchwephesha kwi-Intanethi njenge medium kwezorhwebo yinto ekhulayo. Abathengi bafumana ukuqonda ngakumbi ngokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukunceda ukuzifundisa ngezigqibo zokuthenga.
Ngentengiso yezindlu apha nakwilizwe jikelele kwindawo yokulahla inkunkuma, kuyindalo ukuba iiarhente zoThengiso lweeNdawo kunye nabathengi abafuna ukuthenga baqalisile ukusebenzisa i-Intanethi ukwenza umahluko. Ndithengile ndathengisa amakhaya ambalwa kwixesha elidlulileyo kwaye ndaqonda kwangoko ukuba ukufumana iarhente elungileyo sesona sigqibo sakha sasenza! Igcine usapho lwam amawaka eedola kwaye yenza yonke into ukuba ihambe ngokulula.
UmnyangoFly yindawo yentengiso apho iiarhente ezithengisa izindlu ezithengiswayo zithengisa ithuba lokuthenga abathengi basekhaya. Abathengi badibana nabathengisi bezindlu ababhalisiweyo abaphumeleleyo abanceda kwinkqubo yokuthenga amakhaya kwaye baya kubanika izaphulelo.
Cofa kule posi ukuba awuyiboni ividiyo isebenza njani iDoilyFly!
Unokufunda ngakumbi malunga nokuba olu luvo luphumelele njani kwibhlog yoMnyango. Into emnandi nge-DoorFly kukuba isebenza kubo bobabini umthengi wekhaya kunye nearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba. Kule ntengiso inzima, ndiqinisekile ukuba indawo enokuqhagamshela ezi zimbini zikwimfuno ephezulu!
Ndifanele ukudibana neqela le-DoorFly kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo kwaye bonwabile malunga neshishini kunye nethuba lokuvala lo msantsa kushishino lokuthengiswa kwezindlu! Ndijonge phambili ekuboneni ukuqala kwabo okuncinci kususa!
I-Indianapolis ibonakala iyintengiso enkulu yokuqalisa kwetekhnoloji yeReal Estate! Ihamba ne UmnyangoFlykukwakho:
URBaCS -I-URBaCS sisicelo sefoto esisekwe kwiwebhu esisetyenziswa ngabanini bamakhaya ekwabelaneni ngamava abo okwakha nabahlobo kunye namalungu osapho.
Ukunxibelelana Iselfowuni yokuThengisa izindlu Isixhobo esivelisayo sokuvelisa esisebenzisa zombini imiyalezo kunye nokubanjwa kweenombolo zasimahla ukuqinisekisa ukuba ulwazi lwasekhaya luhlala lufumaneka kubathengi abanokubakho.
Inkampani nganye isebenza ngendlela eyahlukileyo kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kodwa zonke zibonelela ngemarike ngezisombululo ezizodwa ezinceda ekuqhubeni ukuthengiswa kwekhaya!
tags: ukubekwa kwemveliso yeapileiithebhu ze-facebookmboii-saasismsinkqubo yolawulo lweendaba zosasazoizixhobo zokucoca ucingo
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-10: 20 AM
Ukunyaniseka-ndakhangela i-Doorfly ukubona izinto abazibonisayo. Okwangoku, eIndiana, baneearhente ezi-6 ezibhida kumthengi omnye. Umthengi ufuna ukuthenga ikhaya nge- $ 40,000 kwaye eyona bhidi iphezulu yi- $ 500., Endicinga ukuba eyona arhente iphezulu yokubhida ikulungele ukubuyisa okanye ukubuyisela i-500 yeedola. Yekhomishini yabo.
Ingxaki endinayo ngale nto, yiarhente ayazi ngaphambili ukuba iyakuba yintoni ikhomishini yayo.
Ukubhengezwa: IiKhomishini aziseti kwaye zihlala zixoxwa.
Ndibonile amakhaya amaninzi aphethwe yibhanki enikezela isixa sedola yekhomishini. Kule meko, masithi banikezela nge-3% okanye i-1200.00 yeedola. Mhlawumbi, banikezela kuphela nge- $ 1000.00. Kuzo zombini iimeko, iarhente inikezele phantse ngesiqingatha sekhomishini yayo ngaphandle kokwazi ukuba zingaphi iiyure abaza kuzityala. Andikholelwa ukuba lutyalo-mali olunobulumko lwexesha okanye ubuchule bobuchwephesha.
Ndiza kuqinisekisa ukuba iarhente yabathengi elungileyo ingathethathethana ngesivumelwano esingcono kumthengi wayo kune- $ 500. off ikhomishini okanye iipesenti ezingama-50 zekhomishini kwi $ 300,000. ekhaya. Akusoloko malunga nemali- kodwa inkonzo kunye nobuchule umntu anokulindela.
Umzekelo -yintoni f ndixoxisana nge-3% malunga neendleko zokuvala kunye nenxalenye yoko isetyenziselwa ukuthenga ixabiso lenzala nge -5%. Kweli khaya le- $ 40,000, ndigcine umthengi wam $ 200.00 ngonyaka ngenzala kuphela.
Mininzi kakhulu imizekelo yendlela yokukhusela nokwazisa abathengi bakho eyona nzala intengiselwano yokuthengisa izindlu nomhlaba ukuze ungene apha, kodwa enkosi ngokundivumela iisenti zam ezi-2. 🙂
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-1: 33 PM
Ingxelo entle, Paula!
I-DoorFly isebenza ngokuthe ngqo kwilizwi lomlomo ngoku ukuphuma emhlabeni, abantu abahle apho bayisungule le nto ngelixa besebenza ngokusisigxina- inomdla kodwa iya kuthatha ixesha ukwakha umphunga omninzi.
Ndingumlandeli omkhulu wokuqesha iarhente, kwaye njengokhuphiswano kunye nokukhetha oku kuzisa kwintengiso. Andiqondi ukuba i-DoorFly iyazithengisa zonke kwicala lokubhida- imalunga nokunxibelelana neearhente ezifanelekileyo kubathengi abafanelekileyo bekhaya elifanelekileyo.
Ndicinga ukuba ngumzekelo omkhulu. Inika abathengi ukhetho kunye neearhente ngeendlela zokunxibelelana nabathengi abatsha-into enqabileyo kwezi ntsuku!
Happy Holidays kwaye enkosi igalelo lakho!
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2008 ngo-12: 45 AM
Enkosi ikhonkco uthando. Sonwabile malunga no-2009 kuba ekugqibeleni sibona abakhi bamakhaya bengena kumabala eendaba ezentlalo. Abakhi abaninzi baqala ukubhloga, ukuthumela i-tweet kunye nokusebenzisa iisayithi ezinjengeFacebook kunye neFlickr. Nangona u-2009 enokubanobuvila ngokubhekisele kwintengiso yekhaya elitsha silindele ukubona abakhi beqhubeka ukufikelela kwimithombo yeendaba emitsha.